कठिन विकल्प शौचालय
सहमत, सजिलो छैन यस्तो शौचालय रूपमा सामान्य सामान बिना आधुनिक घर कल्पना गर्न। यो हरेक तरिकामा सकेसम्म सहज हुनुपर्छ। आखिर, यो जुन हामीले दिनहुँ प्रयोग एक अपरिहार्य कुरा हो, छ। त्यसैले शौचालय को विकल्प हामी यो सामान्यतया एक भन्दा बढी वर्ष छ किन्न विशेष गरी किनभने, एक गम्भीर दृष्टिकोण आवश्यक छ। आज तपाईं विन्यास, रंग र आकार को एक किसिम को मोडेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो Ergonomic छ, कि कायम गर्न सजिलो र बाथरूम को भित्री मा पूर्ण फिट उत्पादन चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
शौचालय को प्रकार
डिजाइन द्वारा कटोरे माउन्ट र तल्ला विभाजित। पहिलो एक विशेष प्रबलित फ्रेम तल्ला र पर्खालहरु मा आराम प्रयोग गरेर पर्खाल संलग्न। नेत्रहीन, यो भित्तामा झुन्डिएको, एक कचौरा जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ बन्धन यो विधि केही सीमितता छन्। संरचना आफ्नो मात्र होइन वजन तर पनि विराजमान व्यक्तिको वजन पकड हुनुपर्छ भएकोले अधिकतम अतिरिक्त वजन 300 किलो भन्दा बढी हुँदैन। रूस मा व्यापक छैन गर्दा यी शौचालय। यस्तो मोडेल (र आफ्नो स्थापना), स्पष्ट र अधिक महंगा आउटडोर समकक्षों। तर तपाईं एकदम कार्यस्थान बचाउने एक hinged डिजाइन खरिद गर्ने निर्णय भने। सबै पाइप र वाल्व पर्खाल मा निर्माण गरिन्छ, किनभने यस्तो धेरै सजिलो शौचालय हेरचाह। एउटा सुन्दर सबै लाभ तल्ला टाइल आफ्नो आँखा देख्न हुनेछ। तथापि, महंगा प्लम्बिङ यस्तो मोडेल गर्न निकटता सोध्छन्। एक डिजाइन मा एक शौचालय छनौट आफ्नो बाथरूम को क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ।
उठबस शौचालय एकदम केहि समय को लागि बजार मा अवस्थित र खुसी picky खरीदार डिजाइन विविधता हो। तिनीहरूले नाली प्रणालीमा फरक। त्यहाँ एक उच्च निलम्बन sideburns, compacts, monoblocks संग शौचालय कटोरे छन्।
Compacts - साधारण शौचालय, बाल्यकाल हामीलाई थाह छन्। तिनीहरूले गैर-व्यवसायीक द्वारा स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूले स्थापना गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।
Monoblocks - ट्यांक र एक एकल एकाइ मा कचौरा संयोजन शौचालय। यो प्रणाली पूर्ण पानी रिसाव को संभावना समाप्त। तर, चकलेट बार तपाईं मात्र एक एकदम विशाल बाथरूम वा शौचालय मा एक मोडेल राख्न सक्छन्, प्रभावशाली आयाम भिन्न हुन्छ।
चयन उच्च निलम्बन ट्यांक रेट्रो शैली शौचालय Admirers। यी संरचना लागत संकुचित र monoblock को मूल्यहरु भन्दा अलिकति उच्च छ। तर तिनीहरूले पृष्ठभूमि वा महंगा टाइल मा अत्यन्तै स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण मोशाको हेर्न।
द्वारा नाली कटोरे को प्रकार सीधा, गोलाकार, क्यासकेडिङशैलीपाना र शवर विकल्प विभाजित छन्। जो शीर्ष बोक्न र तल सामग्रीहरू निस्तब्धता चूसना जाल संग एक प्रणाली, रूपमा सिर्जना गरियो।
शौचालय को विकल्प एकदम बनाइएको छ जो देखि सामाग्री द्वारा प्रभावित छ। यो एक क्लासिक बरतन, प्लास्टिक, स्टील, फलाम, सिसा, बरतन हुन सक्छ। शास्त्रीय माटोको शौचालय को प्रकाश, बल र सौंदर्य गुणहरू संयोजन समय दीर्घकालीन परीक्षण थिए।
शौचालय को चयन पनि फ्लस उपकरण सिद्धान्त द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन। को नाली मा खर्च नगरेर हुन सक्छ: एक अप्रत्यक्ष जारी, तेर्सो आउटलेट, ठाडो आउटलेट। राम्रो पुरानो शौचालय (घरेलू) एक अप्रत्यक्ष जारी छ। थप आधुनिक प्रणाली - ठाडो आउटलेट संग कटोरे। यो सानो कोठा लागि एक उत्कृष्ट छनौट हो। शौचालय तेर्सो outflow संग कटोरे - हाल को वर्ष को आविष्कार। नियम, सबै नयाँ भवन तिनीहरूलाई द्वारा सुसज्जित छन्।
पछिल्लो एक उपलब्धिहरु पानी मापन रकम एक डुब्नु छ। ठूलो - शौचालय ट्यांक को आवरण मा थिचेर पानी एउटा सानो रकम अन्य थिचेर, हालिएको छ दुई बटन, छन्। यो सिस्टम बचाउँछ पानी खपत, आधुनिक पारिस्थितिकी लागि महत्त्वपूर्ण छ जो।
विन्डो देहली कसरी स्थापना गर्न: चरण निर्देशनहरूको, सुविधा र स्थापना सिफारिसहरू द्वारा चरण
कसरी आफ्नो घर छोडेर बिना प्लास्टिक Windows खरिद गर्न।
धातु संरचना को चित्रकला
कसरी सकेट को प्रतिस्थापन गर्न अगाडि बढ्न समस्या बन्न गर्दैन?
एक संज्ञा को लिङ्ग के हो? यसलाई परिभाषित गरिएको छ? रूपमा
फ्रान्सेली बेडरूम: सुन्दर विचार
इवान Dulin: भूमिकाबारे प्रदर्शन गर्ने अभिनेता को जीवनी
Warmers "Samogrevy" खुट्टा: समीक्षा, निर्देशन
होटल किसिमको जडीबुटीको प्राकृतिक Panwa फुकेत Resort5* (फुकेत, थाईल्याण्ड): विवरण र फोटो
हिप-हप संस्कृति के हो
एक अन्डा दाता कसरी बन्न?
कसरी घर मा papillomas छुटकारा गर्न? राम्रो र सजिलो
"स्पार्क" - Balsam एक फूल
सूर्य पछि: एक विरोधी-peeling र बल्न। के रोज्ने?
"पाल्मोलिव" - शैम्पू (पाल्मोलिव): विवरण, समीक्षा